ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ ကံကြမ္မာကို အံတုရင်း ထိပ်ဆုံးနေရာကို အရယူခဲ့သူ (သို့) ရှနိုင်းယား တွိုင်း - For her Myanmar
သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေအများကြီးကို မြန်မာမှုပြုထားတာတွေရှိလို့ ယောင်းတို့နဲ့ မစိမ်းတဲ့ ဂီတပညာရှင်ပါပဲ…
အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတချို့မှာလည်း ပြန်မတွေးချင်လောက်အောင် ခါးသီးရတဲ့ အတိတ်ဆိုးတွေရှိကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ပါရမီရှင် အဆိုတော် ရှနိုင်းယား တွိုင်း တစ်ယောက်လည်း အပါအဝင်ပါပဲ။ ရှနိုင်းယား တွိုင်း ဆိုတာက ၁၉၉၀ နဲ့ ၂၀၀၀ ကျော် ခုနှစ်တွေမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေအများကြီးကို မြန်မာမှုပြုထားတာတွေရှိလို့ ယောင်းတို့နဲ့ မစိမ်းတဲ့ ဂီတပညာရှင်ပါပဲ။
ရှနိုင်းယား ရဲ့ ငယ်နာမည်က အိုင်လင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်လင်းလေး အသက် နှစ်နှစ် မှာ သူ့ဖေဖေ နဲ့ မေမေ တို့ ကွဲကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိုင်လင်း တို့ ညီအစ်မ သုံးယောက်ရှိနေပါပြီ။ အိမ်ထောင်ကွဲပြီး မကြာခင်မှာ အိုင်လင်းတို့ မေမေ ဟာ နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ကလေးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ အိုင်လင်း ရဲ့ ပထွေးဖြစ်သူ ဂျယ်ရီ ဟာ ကြည်တစ်ခါ နောက်တစ်လှည့် ဆိုတဲ့သူမျိုးပါ။ ဂျယ်ရီဟာ အိုင်လင်း ရဲ့ ဂီတပါရမီကို ငယ်စဉ်ကတည်းက မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ အိုင်လင်း ဟာ ကလေးဘဝကတည်းက ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းတွေဆိုတတ်ခဲ့ပါတယ်။
အိုင်လင်းလေးဟာ ကလေးဘဝမှာတောင် ဂစ်တာကို ရူးသွပ်လွန်းလို့ လက်တွေပေါက်ပြဲသွေးထွက်သည်အထိ ဂစ်တာတီးတတ်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်ပိုင် သီချင်းတွေကို ကလေးဘဝကတည်းက ရေးသားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အိုင်လင်းရဲ့ အနုပညာခရီးက အသက် ရှစ်နှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကလေးတန်မဲ့ အရက်ဘားတွေမှာ ညမိုးချုပ်သည်အထိ သီချင်းဆိုခဲ့ရပြီး အဲဒီက ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ မိသားစုကို ထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်။
အိုင်လင်းတို့ မိသားစုဘဝက မပြည့်စုံမှုတွေ ဂယက်ထနေတဲ့ မိသားစုပေါ့။ မိသားစု စားဝတ်နေရေးမလောက်ငတာကြောင့် အိုင်လင်းတို့ မောင်နှမတွေဟာ စားရတစ်ခါ၊ မစားရတစ်လှည့်နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေရပြီး လုံးဝအစာမစားရတဲ့ နေ့ရက်တွေတောင် ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။
သူ့မိဘတွေဟာလည်း တစ်ချိန်လုံးရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဂျယ်ရီဟာ စိတ်ကောင်းမဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာ မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတတ်သူပါ။ မိန်းမကို သေလုမျောပါး ရိုက်နှက်တတ်ပြီး အိုင်လင်းလေးဟာလည်း ဂျယ်ရီရဲ့ ရုပ်ပိုင်း၊ လိင်ပိုင်း နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းပန်းစော်ကားမှုဒဏ်တွေကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
အိုင်လင်းရဲ့ မိသားစုပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းက သြချလောက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူ့မိဘတွေရဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်ရေး နဲ့ မပြည့်စုံမှုတွေ၊ သူခံစားနေရတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဘေးလူတွေ နဲ့ ကျောင်းကဆရာတွေမသိအောင် ဖုံးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို သိသွားရင် သူ့မိသားစုနဲ့ ခွဲရမှာကို သိပ်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်လို့ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။ (သူတို့နိုင်ငံက လူတွေက မိသားစုတစ်ခုမှာ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေရှိရင် မဆိုင်သလိုမနေဘဲ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာက မိဘတွေကို အရေးယူပြီး ကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်မှုဋ္ဌာနဆီ အပ်လေ့ရှိပါတယ်)
အိုင်လင်း ဟာ သူ့ ပထွေး ကိုလည်း မမုန်းတီးဘဲ သူလေးစားရတဲ့ လူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သူအောင်မြင်ချိန်မှာ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အိုင်လင်းအတွက် အဆင်မပြေမှုတွေအားလုံးရဲ့ ထွက်ပေါက်က ဂီတတစ်ခုတည်းပါပဲ။ သူခံစားသမျှကို ဂီတအဖြစ်သာ အသွင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ တခြားကလေးတွေ အရုပ်တွေနဲ့ ကစားနေချိန် အိုင်လင်းရဲ့ ကစားစရာအရုပ်တွေက ဂီတ နဲ့ စာသား တွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အိုင်လင်း ဘွဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ သူ့မိဘတွေဟာ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုင်လင်းဟာ သူ့အနာဂတ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး သူ့မောင်ညီမတွေကို စောင့်ရှောက်ရပါတော့တယ်။
သူကျွမ်းကျင်ရာဟာ ဂီတပဲမို့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သီချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဂီတ နဲ့ အောင်မြင်ချင်တဲ့ သူဟာ သူ့အသံသွင်းထားတဲ့ တိပ်ခွေလေးတွေကို တေးထုတ်လုပ်ရေးတွေဆီကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဝင်ရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။
သူ့ ပါရမီကို ထုတ်လုပ်သူတွေက တဖြည်းဖြည်းသိရှိခဲ့ပြီး အိုင်လင်းကို ရှနိုင်းယား တွိုင်း ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အခွေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမတစ်ခွေ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ ရှနိုင်းယားကတော့ ပိုပြီး စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာခဲ့ပါတယ်။ မဆုတ်မနစ်ဆက်ကြိုးစားခဲ့တဲ့နောက် ဒုတိယအခွေမှာ ပေါက်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးအဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အခြေအနေဆိုးတွေကြုံခဲ့ရပေမဲ့ အကောင်းမြင်ခြင်း၊ မေတ္တာတရားနဲ့ ဝါသနာပါရာကို တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်တတ်တဲ့ စိတ်တွေကို အခြေခံပြီး ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရုံမက အောင်မြင်ခြင်းကိုပါ ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ရှနိုင်းယားဟာ တကယ်ကို လေးစားလောက်စရာပါ။
ယောင်းတို့လည်း သူ့လိုပဲ ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရဲရဲ ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့….
References: theguardian, nickiswift, myhero
သူ့ရဲ့ သီခငျြးတှအေမြားကွီးကို မွနျမာမှုပွုထားတာတှရှေိလို့ ယောငျးတို့နဲ့ မစိမျးတဲ့ ဂီတပညာရှငျပါပဲ…
အောငျမွငျကြျောကွားသူတခြို့မှာလညျး ပွနျမတှေးခငျြလောကျအောငျ ခါးသီးရတဲ့ အတိတျဆိုးတှရှေိကွပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ပါရမီရှငျ အဆိုတျော ရှနိုငျးယား တှိုငျး တဈယောကျလညျး အပါအဝငျပါပဲ။ ရှနိုငျးယား တှိုငျး ဆိုတာက ၁၉၉၀ နဲ့ ၂၀၀၀ ကြျော ခုနှဈတှမှော အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အဆိုတျောဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ သီခငျြးတှအေမြားကွီးကို မွနျမာမှုပွုထားတာတှရှေိလို့ ယောငျးတို့နဲ့ မစိမျးတဲ့ ဂီတပညာရှငျပါပဲ။
ရှနိုငျးယား ရဲ့ ငယျနာမညျက အိုငျလငျး ဖွဈပါတယျ။ အိုငျလငျးလေး အသကျ နှဈနှဈ မှာ သူ့ဖဖေေ နဲ့ မမေေ တို့ ကှဲကွပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ အိုငျလငျး တို့ ညီအဈမ သုံးယောကျရှိနပေါပွီ။ အိမျထောငျကှဲပွီး မကွာခငျမှာ အိုငျလငျးတို့ မမေေ ဟာ နောကျအိမျထောငျပွုပွီး နောကျအိမျထောငျနဲ့ ကလေးတှေ ရခဲ့ပါတယျ။ အိုငျလငျး ရဲ့ ပထှေးဖွဈသူ ဂယျြရီ ဟာ ကွညျတဈခါ နောကျတဈလှညျ့ ဆိုတဲ့သူမြိုးပါ။ ဂယျြရီဟာ အိုငျလငျး ရဲ့ ဂီတပါရမီကို ငယျစဉျကတညျးက မွတေောငျမွှောကျပေးခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ အိုငျလငျး ဟာ ကလေးဘဝကတညျးက ဂဈတာတီးပွီး သီခငျြးတှဆေိုတတျခဲ့ပါတယျ။
အိုငျလငျးလေးဟာ ကလေးဘဝမှာတောငျ ဂဈတာကို ရူးသှပျလှနျးလို့ လကျတှပေေါကျပွဲသှေးထှကျသညျအထိ ဂဈတာတီးတတျပါတယျ။ သူ့ကိုယျပိုငျ သီခငျြးတှကေို ကလေးဘဝကတညျးက ရေးသားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အိုငျလငျးရဲ့ အနုပညာခရီးက အသကျ ရှဈနှဈမှာ စတငျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ကလေးတနျမဲ့ အရကျဘားတှမှော ညမိုးခြုပျသညျအထိ သီခငျြးဆိုခဲ့ရပွီး အဲဒီက ရတဲ့ဝငျငှနေဲ့ မိသားစုကို ထောကျပံ့ပေးရပါတယျ။
အိုငျလငျးတို့ မိသားစုဘဝက မပွညျ့စုံမှုတှေ ဂယကျထနတေဲ့ မိသားစုပေါ့။ မိသားစု စားဝတျနရေေးမလောကျငတာကွောငျ့ အိုငျလငျးတို့ မောငျနှမတှဟော စားရတဈခါ၊ မစားရတဈလှညျ့နဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးနရေပွီး လုံးဝအစာမစားရတဲ့ နရေ့ကျတှတေောငျ ကွုံခဲ့ရပါသေးတယျ။
သူ့မိဘတှဟောလညျး တဈခြိနျလုံးရနျဖွဈကွပါတယျ။ ဂယျြရီဟာ စိတျကောငျးမဝငျတဲ့အခါမြိုးမှာ မိနျးမနဲ့ ကလေးတှကေို နှိပျစကျညှဉျးပနျးတတျသူပါ။ မိနျးမကို သလေုမြောပါး ရိုကျနှကျတတျပွီး အိုငျလငျးလေးဟာလညျး ဂယျြရီရဲ့ ရုပျပိုငျး၊ လိငျပိုငျး နဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ညှဉျးပနျးစျောကားမှုဒဏျတှကေို ခံစားခဲ့ရပါတယျ။
အိုငျလငျးရဲ့ မိသားစုပျေါထားတဲ့ ခဈြခွငျးက သွခလြောကျတယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ သူ့မိဘတှရေဲ့ အဆငျမပွတေဲ့အိမျထောငျရေး နဲ့ မပွညျ့စုံမှုတှေ၊ သူခံစားနရေတဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှကေို ဘေးလူတှေ နဲ့ ကြောငျးကဆရာတှမေသိအောငျ ဖုံးကှယျခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို သိသှားရငျ သူ့မိသားစုနဲ့ ခှဲရမှာကို သိပျစိုးရိမျခဲ့တယျလို့ နောငျတဈခြိနျမှာ ဖှငျ့ပွောခဲ့ပါတယျ။ (သူတို့နိုငျငံက လူတှကေ မိသားစုတဈခုမှာ ဒီလို အဖွဈဆိုးတှရှေိရငျ မဆိုငျသလိုမနဘေဲ သကျဆိုငျရာကို တိုငျတတျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ သကျဆိုငျရာက မိဘတှကေို အရေးယူပွီး ကလေးတှကေို စောငျ့ရှောကျမှုဋ်ဌာနဆီ အပျလရှေိ့ပါတယျ)
အိုငျလငျး ဟာ သူ့ ပထှေး ကိုလညျး မမုနျးတီးဘဲ သူလေးစားရတဲ့ လူတဈဦးဖွဈတယျလို့ သူအောငျမွငျခြိနျမှာ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ အိုငျလငျးအတှကျ အဆငျမပွမှေုတှအေားလုံးရဲ့ ထှကျပေါကျက ဂီတတဈခုတညျးပါပဲ။ သူခံစားသမြှကို ဂီတအဖွဈသာ အသှငျပွောငျးခဲ့ပါတယျ။ တခွားကလေးတှေ အရုပျတှနေဲ့ ကစားနခြေိနျ အိုငျလငျးရဲ့ ကစားစရာအရုပျတှကေ ဂီတ နဲ့ စာသား တှပေဲဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အိုငျလငျး ဘှဲ့ရတဲ့အခြိနျမှာ သူ့မိဘတှဟော ယာဉျမတျောတဆဖွဈပွီး ကှယျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အိုငျလငျးဟာ သူ့အနာဂတျကို စှနျ့လှတျပွီး သူ့မောငျညီမတှကေို စောငျ့ရှောကျရပါတော့တယျ။
သူကြှမျးကငျြရာဟာ ဂီတပဲမို့ စားသောကျဆိုငျတှမှော သီခငျြးဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဂီတ နဲ့ အောငျမွငျခငျြတဲ့ သူဟာ သူ့အသံသှငျးထားတဲ့ တိပျခှလေေးတှကေို တေးထုတျလုပျရေးတှဆေီကို တဈခုပွီး တဈခု ဝငျရောကျပွသခဲ့ပါတယျ။
သူ့ ပါရမီကို ထုတျလုပျသူတှကေ တဖွညျးဖွညျးသိရှိခဲ့ပွီး အိုငျလငျးကို ရှနိုငျးယား တှိုငျး ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ အခှထေုတျပေးခဲ့ပါတယျ။ ပထမတဈခှေ မအောငျမွငျခဲ့ပမေဲ့ ရှနိုငျးယားကတော့ ပိုပွီး စိတျဓာတျခိုငျမာခဲ့ပါတယျ။ မဆုတျမနဈဆကျကွိုးစားခဲ့တဲ့နောကျ ဒုတိယအခှမှော ပေါကျခဲ့ပွီး နာမညျကွီးအဆိုတျောဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
အခွအေနဆေိုးတှကွေုံခဲ့ရပမေဲ့ အကောငျးမွငျခွငျး၊ မတ်ေတာတရားနဲ့ ဝါသနာပါရာကို တဈစိုကျမတျမတျလုပျတတျတဲ့ စိတျတှကေို အခွခေံပွီး ရှငျသနျရပျတညျနိုငျရုံမက အောငျမွငျခွငျးကိုပါ ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ ရှနိုငျးယားဟာ တကယျကို လေးစားလောကျစရာပါ။
ယောငျးတို့လညျး သူ့လိုပဲ ကွုံလာတဲ့ အခကျအခဲတှကေို ရဲရဲ ရငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့….
Tags: Biography, Knowledge, Shania Twain, Terrible Fate, Women News